IPocketbook Touch HD uphononongo lwe-3: amaxabiso, amanqaku, kunye nokuvela | Zonke iReaders
IPocketbook Touch HD uphononongo lwe3
UNacho Morató | | I-eReaders, IPocketBook
Kudala sivavanya inkqubo ye- IPocketBook Touch HD 3, isixhobo esifuna ukukhuphisana nabathengisi abaphambili be-6 ″ . Iza ilayishwe yiyo yonke into. Qhubeka ufunda kwaye uzobona ukuba injani into efundwayo kuthi.
Ukuthetha ubuso ngobuso ngezixhobo ezisekwe njenge-Kindle Paperwhite kunye ne-Kobo Clara HD, ukongeza ukuthelekisa umgangatho ngexabiso elifanayo, kuya kufuneka inikeze enye into. Kwaye i Chukumisa i-HD 3 isinika amanqaku amaninzi kunye neenkcukacha zokuba nangona zinokubonakala zibalulekile, inyani kukuba xa sele unazo, ziyaxabiswa
Ngaphambi kokuba ndiqale ngohlalutyo ndingathanda ukuphawula kwinto abasoloko bendibuza yona kamva. Ewe ungamamela iincwadi zomculo.
Siya kuluhlu lweempawu ezenza isixhobo.
1 Thenga iTouch HD 3
4 Iimpawu kunye nenkangeleko
5 Isoftware kunye nokusebenza
5.1 Iincwadi zomsindo
5.3 Isicatshulwa kwintetho
5.4 Imidlalo, amanqaku, ikhalityhuleyitha nekhalenda
5.5 Inkqubo yendalo kunye nonxibelelwano
5.6 Iindaba RSS
6 Kulahleke ntoni?
Thenga iTouch HD 3
Isifundi esimi phezulu kwi-Kindle Paperwhite. Ilungile ukuba unomdla wokumamela iincwadi ezimanyelwayo
Ixabiso layo yi- $ 159
Isixhobo kunye nomboniso
6, E Ink® Carta ™ Isiboniso (1072 × 1448) 300 dpi
Ngaphambili + (ukukhanya okuthe ngqo)
Inqanaba le-16 elimnyama
Imilinganiselo 161,3 x 108 x 8 mm
Ubukhulu be155 g
Inkqubo yeCore processor (2 × 1 GHz)
Iscreen sokuchukumisa okuninzi
I-512 MB ye-RAM
Ibhetri ye-1500 mAh (Li-Ion Polymer).
Ukunxibelelana ngaphandle kwamacingo kwi-Wi-Fi (802.11 b / g / n)
Ukukhuselwa kweHZO TM (IPX 7)
Iindaba ze-RSS, amanqaku, i-Chess, iKlondike, iScribble, iSudoku.
Iifomathi ezifundwayo (PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB (DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM)
Iifomathi zomsindo MP3, M4B
Umboniso ulunge kakhulu. Ibhokisi encinci yekhadibhodi enokusetyenziselwa ukugcina isixhobo.
Nangona kubonakala ngathi ngumcimbi omncinci, Iinkcukacha ezincinci zomgangatho esizibonayo kwasekuqaleni zithetha kakhulu malunga negama.
Kwibhokisi siya kufumana isixhobo. Intambo ye-usb-miniusb yokutshaja isixhobo kunye ne-mini-usb yokwenza intambo kwinxalenye yomsindo.
Imbonakalo yokuqala endandinayo xa ndambonayo kukuba wayemncinci incinci kakhulu kwi-6 ″ kwaye intle. Ndiyithanda kakhulu indlela ebukeka ngayo. Ubungakanani, ukuchukumisa umbala, ezo freyimu zincinci ziyenza icucada.
iqhinaamaqhosha omzimba asezantsi. Owokuqala ukuya ngqo kwiphepha lasekhaya le-ereader, okwesibini ukubuyela umva, owesithathu ukuya phambili kunye ne-4 ukubonisa ukhetho lokucwangciswa naphi na apho sikhona.
Iqhosha lasekhaya liluncedo kakhulu xa ulahlekile kancinci kwaye ufuna ukuya ngokukhawuleza kumhlaba ophawulweyo. Ngelixa ndivavanya umntu ofundayo kodwa ndisebenzise kakhulu. Iqhosha lokumisela liluncedo kakhulu, kuba kuhlala kungonwabisi ukubonisa iimenyu kwiscreen sokuchukumisa.
Ndiwathanda ngcono amaqhosha okupasa emacaleni. Kulapho ndiye ndaziqhela ukuzisebenzisa kwaye ndiyifumana ikhululekile ngakumbi ngenxa yobume nokubambelela kweencwadi zeencwadi. Kwaye lelinye inqaku lokugcina engqondweni.
Fumana i-ereader emnandi, enesakhelo esincinci, kufezekiswa ngendleko yokubambelela. Ukuhlala apho akukho ngxaki kuba singayithatha ezantsi, kodwa ukuba uzama ukufunda ebhedini uyabona ukuba ayisiyondlwana ilula leyo. Kwaye izinto ezakhiwe ngazo azincedi ukuhambisa ukhuseleko nokuba.
Isoftware kunye nokusebenza
Uluhlu lwezinto ezibandakanywa kwiTouch HD 3 lide kakhulu kwaye bendifuna ukuzama yonke into. Ekuphela kwento endingakhange ndiyivavanye kukhuseleko lwamanzi ukubona ukuba yi-IPX7 eya kuthi isivumele ukuba siyifake emanzini.
IPocketBook inenkqubo yayo esekwe kwiLinux. Kwaye igcwele ngeempawu ezipholileyo. Eyona inomdla:
ÉEsi sisifundi sokumamela iincwadi zeAudio. Nokuba awuyiboni i-jack port, iza ne-miniUSB kwi-jack adaptha ekuvumela ukuba uqhagamshele ii-headphone kwaye wonwabe kwiincwadi zomsindo ezigqityiweyo. Ungazithenga kwenye indawo okanye kwiqonga lePocketbook uqobo, nangona kungekho khathalogu ngeSpanish, kodwa iya kufika ngokuqinisekileyo
Unokusebenzisa ii-headphone ezingenazingcingo ngokuzimatanisa ngeBluetooth kwaye ke onwabele zonke iindlela zomsindo ngaphandle kweentambo.
Ukuqhubeka nokusebenza kwesandi. Sinokusebenzisa i-ereader njengomdlali weaudiyo ukufaka ngaphambili iifayile esifuna ukumamela.
Ewe awunakho ukumamela umculo ngasemva ngelixa sifunda. Okanye siyafunda, okanye siyadlala, okanye simamele umculo, kodwa hayi izinto ezininzi ngaxeshanye.
Ndikhumbula nayiphi na indlela yokumamela iipodcast zeqonga eliphambili. Ndikwazile ukuyenza ngokungena kwisikhangeli. Ungafaka iVoox umzekelo, khetha isahluko sePodcast kwaye umamele, kodwa ukuba bekukho isisombululo sendalo kwisifundi kungachukumisa.
Inokusebenza Isicatshulwa ukuya kwintetho, ekuthi ngayo iguqule nayiphi na ifomathi ayifundayo ibe yintetho. Ke ungathatha i-epub, mobi, i-pdf kwaye uyifundele.
Isebenza kakuhle ndiyivavanye ngeelwimi ezi-2, isiNgesi kunye neSpanish kwaye nangona ingenayo i-cadence enjenge-audiobook inokuba luncedo kwiimeko ezithile okanye kubantu abaneengxaki ezibonakalayo.
Imidlalo, amanqaku, ikhalityhuleyitha nekhalenda
Ndihlala ndikhusela ukuba umntu ofundayo unemisebenzi ecace gca. Sisixhobo esikhethekileyo somsebenzi othile. Kungenxa yoko le nto isebenza kakuhle kwaye akukho sizathu ngokuthelekisa ithebhulethi.
Sifumana imisebenzi eyahlukeneyo, enje imidlalo eyahlukeneyo kubandakanya chess, solitaire kunye sudoku, iphedi inowuthi, sokubala kunye nekhalenda. Kodwa andicingi ukuba nabani na uyisebenzisa nge-smartphone ekhoyo namhlanje. Kwenzeka kum kuphela ukuba bayisebenzise ukukhupha ityhefu kwaye bangabethwa ziifowuni ezihlala ziqwalaselwa zeefowuni.
Inkqubo yendalo kunye nonxibelelwano
Inendawo yayo ecosystem, ivenkile yayo edityaniswe kwi-ebook, apho ungathenga khona iincwadi zeencwadi. Inefayile ye-Isicelo se-Android kunye ne-iOS esivumela ukuba sibeke yonke into kwindawo enye.
Ilifu. Sinendawo ethile yokugcina efini esetyenziselwa ukungqamanisa zonke izixhobo esizidibanise neakhawunti yethu.
lwebhokisi, Sinokuvumelanisa iakhawunti yethu yeDropbox ngesixhobo sethu ukuze sikwazi ukufunda nokulawula ii-ebook
Thumela kwiPocketBook ekuvumela ukuba uthumele iifayile nakwezinye iifom ezifundwa ngumfundi ngeposi kwaye ziya kubonakala kumfundi wethu xa ivumelanisa ngeWIFI
Inomfundi we-RSS, sinokulandela ukutya kweeblogi ezisithandayo, kodwa amanqaku afundwa kwisikhangeli somfundi kwaye andikuthandi oku kakhulu kuba kukho amaphepha angalayishi kakuhle, abeka izinto ezininzi ezingaqhelekanga izinto, njl.
Okwangoku apho izixhobo ezininzi zisilela khona, iTouch HD 3 iyigqithisa ngokulula. Ukukhanya okungafaniyo kunye nokukhanya kwesibane.
Kwakhona ivumela ukuba sandise kwaye sinciphise ukukhanya kokukhanya kunye nokukhanya okukhanyayo ngaphakathi kwe-ebook ngaphandle kokuyeka ukufunda. Kule nto kufuneka uslayide umnwe wakho ngokuthe nkqo kwiscreen. Ukuba siyenza ngasekhohlo siya kulawula ukukhanya kwe-SMART kwaye ukuba siyenza ngasekunene isibane sangaphambili. Iluncedo kakhulu inyani.
Kusenokwenzeka Eyona nto iphambili kukungabikho kweDS. Akukho slot yekhadi.
Into endiyisebenzisa kakhulu kukungena kwi-intanethi, jonga inqaku lezimvo, kwiwebhusayithi, kwiphephandaba, kwimagazini, njl.njl. Kuhlobo lunokwenziwa ngeeplagi ezininzi ezithunyelwa kuhlobo, eKobo sinokuvumelanisa lo mxholo kunye nePokotho kodwa andifumananga nantoni na yokulinganisa oku kusebenza kwiPocketBook ereader.
Kuyinyani ukuba kukho iindaba RSS kodwa ayifani, kuba njengoko besitshilo ivula kwisikhangeli kwaye ngenxa yokuba kuya kufuneka ufake ukutya kwangaphambili, apho ungangabinamdla kuyo yonke into kwaye into endiyicebisayo ukuthumela nayiphi na iwebhusayithi enomdla xa uyibona ukuze ukwazi ukuyifunda ngokuzolileyo kamva.
Ekugqibeleni i-bullshit. Andikaboni naluphi na ukhetho lokwabelana ngokukrwelelwa okanye izimvo zencwadi ebook kwiinethiwekhi zentlalo. Ayikuko ukuba ndiyayibona iyimfuneko, andiyisebenzisi kodwa ndiyazi ukuba abantu abaninzi bayayisebenzisa.
Isiphetho kukuba ndiza kuyithenga kwaye ndiyisebenzise kwimini yam yemihla ngemihla. Kwaye anditsho njalo kubafundi abaninzi. Ndiyisebenzise iiyure ezininzi, ndiziva ndikhululekile kwaye ngaphandle kokuqhekeka nakanye, okanye ndinengxaki.
Njengoko ndibekile kulo lonke uphononongo, amanqaku ayo abuthathaka ndicinga ukuba ayabambeka xa ulele phantsi kwaye ungabinakho ukuthumela kum amanqaku avela kwiwebhu njengokuwafunda kamva (kodwa oku kukusetyenziswa ngabantu abaninzi abangakwenziyo).
Ayinayo i-slot ye-microSD kwaye yinto ehlala isiza kubantu abanethala leencwadi labo kule fomathi.
ndiyabona umfundi efunda abantu abanomdla kwiincwadi ezimanyelwayo kunye nazo zonke iaudiyo kwinto enye efundwayo. Kwaye ndicinga ukuba kuya kufuneka ndisebenzise ngakumbi lo mbandela ngokongeza amandla okumamela kunye nokulandela iipodcast.
Ihamba ngexabiso eliphezulu xa kuthelekiswa noko sikuthatha njengokhuphiswano lwayo, zii-159 zeeuros xa kuthelekiswa ne-129 yePhepha elinePhepha okanye uClara. Kwaye umntu ongazixabisi zonke izinto ezongezelelekileyo abanazo kuba abazidingi uneKobo Libra kwi- € 179. Ke ndiyayibona iphakathi phakathi kwamanqanaba.
IPocketBook Touch HD 3
Unokumamela iiAudioBooks kunye nomculo
Imisebenzi emininzi, imidlalo, ikhaltyhuleyitha, njl.
Ixabiso liphezulu kancinci
Bamba xa ulele phantsi
Uphawu olungaziwayo eSpain
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » isibulali » I-eReaders » IPocketbook Touch HD uphononongo lwe3
Uphengululo lwePocketBook Umbala
Imeko yetekhnoloji yentengiso ereader kwi2020